May 21, 2009 by dalabyo 2 Comments
Dabcan, ka dib sii daayo kasta oo waaweyn yimaado update ah. Update Tani dejista arrimaha runtii yar yar (taas oo keliya dhibta ka html jabay – waxay u baahan yihiin code xusuusin ah oo ku saabsan tirno fiirinta?). Waxaan u mahad Fernanda iyo Mike taas oo aannu ogaanno arrimaha lahaa. Sida hadiyad yar for release waxaan ku daray muuqaal cusub widget aad soo dhaweeyay tijaabiso, waxay leeyihiin madadaalo! 🙂
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: yaryar, widget